Ganacsatada Maxalliga Ah Oo Khatar Gelin Kara Wadahadallada Nabadda Ee Somaliland Iyo Soomaaliya | HAATUF ONLINE
Home » Somali News » Ganacsatada Maxalliga Ah Oo Khatar Gelin Kara Wadahadallada Nabadda Ee Somaliland Iyo Soomaaliya
Ganacsatada Maxalliga Ah Oo Khatar Gelin Kara Wadahadallada Nabadda Ee Somaliland Iyo Soomaaliya
Muqdisho, September 28, 2020 (Haatuf) – Madaxweynaha dowlada Federalka ah ee Somalia Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u jeestay ganacsato damiir laawayaal ahi si ay xoog ah cadaadis ugu saaraan Somaliland inay aqbasho inay la midowdo Soomaaliya.
Qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ayaa la sheegay inay dhabar jab ku hayaan Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, kuwaas oo ay ka mid yihiin wakiilo maxali ah oo ka shaqeeya shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah, kuwaas oo ruqsadii ay kaga shaqaynayeen Somaliland lagala noqday sababo la xidhiidha cadaadis uga yimid dhinaca Muqdisho oo ahaa inay joojiso hawlihii ay ka hayeen Somaliland muddadii uu socday fiditaanka Covid-19. Waxaanay shirkadahaasi hadda dhaqdhaqaajiyeen odayaal si ay madaxweynaha Somaliland ugula hadlaan inuu ka noqdo ruqasadahaasi shaqo ee lagala noqday.
Sidoo kale waxaa la abaabulayaa dhalinyaro ka soo jeeda beelaha qaar ee Somaliland oo bilaabay inay cadaadis saaraan dawlada inay dib u siiso shirkadaha diyaaradaha ruqsadaha taas oo loo arko inay tahay cadaadis ka imanaya magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan doorashooyin, ay xukuumada Somaliland ugu muujiyaan xumaan.
Kuwa diidan dibin-daabyadan socota waxay ka digayaan in labada shirkadood ee kala ah Al-Arabia iyo Fly Dubai oo labaduba ka socda dalka Imaaraatka Carabta ay khatar gelin karaan xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya Abu Dhabi iyo Hargeysa.
Mucaaradka ayaa ku eedeeyay Soomaaliya in lagu eedeynayo inay xidhiidh la leedahay Ururka Ikhwaanul Muslimiin, taasoo sameyneysa wax walba oo ay ku carqaladeyn karto xidhiidhka Imaaraatka la leeyahay wadamada Afrika iyo gaar ahaan Somaliland.
Dowladda Farmaajo ayaa iyadana waxaa lagu eedeynayaa laba waji u yeeshay wadahadalada nabadeed ee ka socda Jabuuti isla mar ahaantaasna adeegsaneysa wakiillo gudaha ah si ay xasilooni darro uga abuurto Somaliland.
Soomaaliya waxay u isticmaaleysaa doorashada ku soo fool leh Somaliland inay uga faa’iideysato odayaasha qabaa’ilka iyo gacmo shisheeye si ay uga hortagaan dowladda iyaga oo kicinaya dhalinyarada.
Dowladda Farmaajo oo horey loogu eedeeyay inay maalgelisay shirkado shisheeye si ay xasilooni darro uga dhaliso Somaliland waxay ka heli kartaa caawimaad kale oo maxalli ah odayaasha iyadoo ku dhiirrigelineysa tartan qabiil iyo ganacsi si loo gaadho wixii ay ku guuldareysteen inay ka helaan wadahadallada socda.
Soomaaliya iyo Somaliland waxay kulmeen bishii July si ay uga wada hadlaan sidii loo xallin lahaa khilaafaadkooda iyadoo wadahadal ka dhacay Jabuuti ay taageereen labada dhinac ee Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
Kulankan ayaa waxaa martigaliyay isla markaana shir gudoominayay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee dalka Jabuuti.
Eedeymaha socda iyo eedeymaha ka soo horjeedka ah waxaa hubaal ah inay meesha ka saari doonaan kalsoonidii laga dhex dhisay dhinacyada.
Gabagabada maalinta, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la magacaabo gudiyo farsamo oo wadahadalada sii wata. Dhinacyadu waxay kaloo ku heshiiyeen in aan la siyaasadeyn kaalmada horumarinta caalamiga iyo maalgashiga.
Booqashadii wadajirka ahayd ee ay soo jeediyeen Farmaajo iyo Axmed bishii Febraayo in ay ku yimaadaan Somaliland ayaa la hakiyay sababta oo ah diidmo xoog leh oo kaga timid mucaaradka iyo baarlamaanka Somaliland.
Ka dib dagaal dhiig ku daatay dabayaaqadii sideetameeyadii, oo ay ururada xuquuqul insaanku sheegeen in ay ku dhinteen tobanaan kun oo ka tirsan gobollada Somaliland ah, Somaliland waxay ku dhawaaqday gooni isu taagga bishii May 1991 laakiin ma helin aqoonsi caalami ah.